राजधानीको बिषयलाई लिएर आक्रोशित बने बाबुराम, ट्वीट गर्दै कोसँग किन मागे माफी ? — Sanchar Kendra
राजधानीको बिषयलाई लिएर आक्रोशित बने बाबुराम, ट्वीट गर्दै कोसँग किन मागे माफी ?
सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी दल कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा झन्डै तीन वर्षदेखि थाती रहेको प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले मंगलबार वैधानिक रूपमा टुंग्याएको छ । प्रदेशसभा स्थापनाको २ वर्ष ८ महिना २ दिनपछि प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएको छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको पक्षमा मतदान गर्न नेकपा र स्थायी राजधानीको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेका थिए । नेकपाका ६१ सदस्यमध्ये ६० जनाले पक्षमै मतदान गरे । कांग्रेसका राप्ती र भेरीका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले ह्वीप अस्वीकार गर्दै राजधानी दाङको पक्षमा मतदान गरे भने लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लाका १३ प्रदेशसभा सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे । कांग्रेसका १९ सदस्य थिए ।
६ सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य विभाजित देखिए । चार जनाले पक्षमा भोट दिए भने दुईले मतदान बहिष्कार गरे । जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले उपस्थित भएर पनि मतदान नगरेका हुन् । जसपाका सन्तोष पाण्डेले जनताको भावना र पार्टीको नीतिविपरीत मतदानमा सहभागी हुन नसकेको बताए । जनमोर्चाकी जीसीले पार्टीको नीतिअनुरूप राजधानीको पक्ष/विपक्षमा नलागेको बताइन् । जनमोर्चा संविधान निर्माणदेखि नै संघीय शासन प्रणालीको विरोधमा रहेको पार्टी हो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नाम र स्थायी राजधानी घोषणा प्रक्रियामा सहमति जुटाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सफल हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सक्दो प्रयास गरेकै हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा कांग्रेसका सभापतिजीलाई भेट्ने प्रयास सफल नभएपछि अर्का रूपन्देहीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेतासँग छलफल गरेकै हुँ तर उहाँको अडानबाट पार नलाग्ने देखेपछि स्थानीय नेतृत्वसँग छलफल गरिएन ।’
उनले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको नाम नलिईकन उनीसँग छलफल गरेको संकेत गरे । तर, छलफलमा उनी दाङको पक्षमा नरहेको र त्यो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेतालाई नभएको जनाएपछि प्रदेशसभामा छुट्टै छलफल नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय नेताहरूको बीच प्रतिष्ठाको विषय बनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वर्ष पुसमा नै नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे मुख खोलेका थिए । उनले केन्द्रबाटै एउटा समझदारी आवश्यक पर्ने भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वकै समझदारीमा प्रदेश ३ को नामकरण र राजधानीको विषय टुंगिएको थियो ।
अहिले प्रदेश ५ को हकमा पनि त्यही खालको केन्द्रीय समझदारीपछि प्रदेशसभामा प्रस्ताव अघि बढेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टी महासचिव पौडेलको विरोध रहँदारहँदै पनि सिधै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल गरी टुंगो गर्न पत्र पठाएका थिए । तर नेकपा अध्यक्षद्वयले मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रस्तावअनुसार दाङ देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी र लुम्बिनी नामकरण गर्ने भन्नेमा आफूहरूको समर्थन रहेको भन्दै जवाफ फर्काए ।
ओली र दाहाल सहमत भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल बुटवल राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने महासचिव पौडेलसँग थप सहमति खोज्नतर्फ लागेनन् । गत शुक्रबार सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेशसभामा दर्ता गराए । यता आइतबार बिहान बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र महासचिव पौडेललाई मिलाउने प्रयास पनि भयो । तर पौडेलले बुटवलको अडान नछोडेपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पोखरेललाई नै साथ दिए ।
केन्द्रीय साथ सहयोगमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्धक्कसाथ मंगलबार प्रदेशसभाबाट निर्णय गर्न सफल भए । देउखुरीमा राजधानी बनाउने निर्णयले प्रदेशको राजधानी प्रादेशिक भूगोलको मध्यभागमा त परेको छ नै, दाङमा नै राजधानी ल्याउँछु भन्ने चुनावी वाचा पूरा गरेको जस लिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सजिलो भएको छ । उता बुटवल राजधानी बनाउँछु भन्ने नेताहरूका लागि भने यो निर्णयले दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।
रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी प्रदेशको प्रशासनिक राजधानी दाङ भए पनि लुम्बिनी क्षेत्र सांस्कृतिक, पर्यटकीय र वित्तीय राजधानी हुनेछ । सरकारले मंगलबार मात्रै रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटेर सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने बताएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश राजधानी दाङ हुँदैमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास र महत्त्वमा पछाडि नपर्ने बताउँदै मन दुखाउन नहुने बताए । प्रदेशका प्रशासनिक काम दाङबाट भए पनि आर्थिक क्रियाकलापमा यस क्षेत्रमै हुने उनले दाबी गरे । राजधानी सर्दैमा उद्योग व्यवसाय खस्केला भनेर उद्योगी व्यवसायीले मन दुखाउन नहुने उनले बताए । ‘लुम्बिनी क्षेत्र ६ जिल्लाबाट रूपान्तरण भएर प्रदेशका १२ जिल्लामा फैलिएको छ,’ उनले भने, ‘जति ठूलो क्षेत्र हुन्छ, व्यापार व्यवसायका लागि वस्तु त्यति ठूलो ठाउँमा पुग्छ । कसैले मन खुम्चाउनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ ।’